Tonga tao amin’ny seranana ny sambo sinoa ary nampidina kaontenera voalaza fa nitondra fitaovana hanamboarana fotodrafitrasa, raha ny vaovao azo. Raha ny vinavina dia ho avy hiantsona ao Antsiranana koa ny sambo lehibe Costa, hitondra mpizahatany vahiny maro ny sabotsy izao. Velon’ahiahy ny mponina eo anatrehan’izany, indrindra manoloana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus, izay efa saika voa ny lafivalon’izao tontolo izao, ka anisany ny aty amin’ny Kaontinanta Afrikanina sokajiana ho marefo. Tafiakatra 3116 hatramin’izao ny maty ka ny 2 943 dia tao Chine avokoa. Mahatratra 76 ny firenena ahitana azy ka olona 91000 any ho any no efa misy ilay tsimokaretina. Tafiakatra 79 ny olona maty any Italie sy Iran, raha toa ka 28 ny tany Korea Avaratra. Ireo firenena telo ireo no nahitana olona maty betsaka indrindra sy mitondra ny tsimokaretina taorian’i Chine.